FEBARAAYO: Waa Bil Soomaalidda Ogaadeenya Xasuus murugo & mid farxadeedba u xambaarsan oo aan la iloobi karin!!!.
Feb 6, (2013 (QOL) Dhacdo walba oo aduunka ka dhacda waxay leedahay wax lagu xasuusto taas oo umadda dambe qasab ku tahay in ay ogaadaan wixii xiligaas dhacay waxayna dadka aan markaas joogin u keenaysaa in ay la socdaan Bisha Febaraayo waa bil taariikh u leh dhamaan shacabka Soomaalida Ogaadeenya, waana bil kulmisay waxyaabo badan. Haba Warbaahinta Qorahay Media ayaa soo uruurisay wax yaabihii ugu muhiimsanaa ee bishaas dhacay sanadkii 1994 ayada oo warbaahintu idin xusuusisa sanadba kuna soo kordhisa ama soo hesha wixii dhacay xiligaas.
Bisha Febaraayo waxay kulmisaa maalmo xusuus iyo qadarin ka mudan shacbiga Soomalida Ogaadenya Bishan gudaheeda waxaa dhacay dhacdooyin waawayn oo taariikhda dalka Ogaadenya baal muhiim ah ka galay, maalmahaas qaar waxay leeyihiin murugo, qaara farxad, qaara labadaba way isku darsadeen.
06 Febraayo 1994 Waxay sidoo kale Ciidamada Gumaysiga Itoobiya magaalada Wardheer ku dileen gudoomiye ku xigeenkii magaalada Wardheer Marxuum Cabdulaahi Ibraahim Yuusuf (Abdullahi Ganay). Marxuum Cabdullahi Ganey wuxuu horistaagay qorshayaal ay Itoobiya ku doonaysay inay ku khayaamayso shacbiga. Mid ka mid ah qorshayaashaas wuxuu ahaa shir ay dawladdu doonaysay inay isugu yeedho Odayaasha iyo cuqaasha dadwaynaha laguna qasbo inay taageraan mawqifka dawladda oo ahaa in shacbigu ku sii hoos jiro dawladda Itoobiya.
Go’aanka Baarlamaanku wuxuu lahaa muhimad iyo tixgalin gooni ah maadaamada uu baarlamaanku ahaa kii ugu horreeyey taariikhda Ogaadeenya ee shacbigu si dimoqraadi ah u soo doorteen kalsoonina ka haystay dadwaynaha, sidoo kale go’aanku wuxuu waafaqsanaa dastuurkii ku meel gaadhka ahaa ee Itoobiya oo sheegayey in ummad walba ay dooran karto aayahooda marka ay dhamaato waqtiga ku meel gaadhka ah ee dawladdii Itoobiya. Maalintii go’aankan la qaatay waxaa loo aqoonsaday inay noqoto “Maalinta aayo-ka-talinta” ee dalka Ogaadeenya.
17 Febraayo 1994 Waxay Cuqaasha Ogaadeenya Zenawi hortiisa ka taageereen go’aankii Barlamanbka isagoo shir Albaabada loo xidhay kula jira magaalada Harar, isla Badhtamihii Febraayo 1994 Ururkii ONLF Golihiisii dhexe ayaa go’aan aqlabiyad buuxda ah ku taageeray go’aankii Baarlamaanka kuna baaqay in si nabadgalyo ah oo waafaqsan dastuurkii ku meel gaadhka ahaa ee Itoobiya lagu dhameeyo dhibaatada u dhaxaysa Ogaadeenya iyo Itoobiya.
22 Febraayo 1994 Waxaa magaalada Wardheer laga qabanqaabiyey bannaanbax lagu taageerayo go’aankii baarlamaanka iyo kii ka dambeeyey ee JWXO ee lagu codasaday in dadwaynaha afti la waydiiyo sidoo kale waxaa xilligaas ku sugnaa magaalada Wardheer Guddoomiyihii JWXO Allah ha u naxariistee Marxuum Sheikh Ibraahim Abdalla oo isna hadal ka jeedin lahaa bannaanbaxa.
Isla bishaan waxay ciidamada Itoobiya gurigiisa kala bexeen magaalada Dhagaxbuur Mukhtaar Gadhweyne isaga oo ay ku hortogteen xaaskiisa Xaliimo Haybe Mohamuud, isla habeenkaas waxay dileen Dhuux Siyaad, Sidoo kale waxay isla xiligaas dileen nin magiciisa naloogu sheegay Taagwaa, waxay sidoo kale si waxash nimo ah ugu dileen isla magaalada Dhagaxbuur Ina Ahmed Nuur oo ahaa Macalin bare Dugsiga Hoose Dhagaxbuur. Sidoo kale Gudoomiyhii gobalka Dhagaxbuur Bulbul oo ilaa hadda aan lagaranaynin geeri & nolo.
Ciidamada Itoobiya waxaa amar lagu siiyey inay joojiyaan bannaanbaxa isla markaana soo qabtaan Madaxwaynaha JWXO geeri ama nololba, Ciidamada Itoobiya oo ku hubaysan hub culus ayaa soo weeraray wafdigii JWXO oo uu ku jiro Guddoomiyihii waxayna shacbigii reer Wardheer maalintaas si geesinimo iyo wadaninimo ah u difaaceen magacii umadda iyaga oo qab jabiyey ciidamadii xoogga badnaa ee Itoobiya kana horistaagay inay gacanta ku dhigaan Madaxwaynihii JWXO iyo inay joojiyaan bannaanbixii. Ciidmaada Itoobiya oo adeegsanaya hubka cul-culus waxay xasuuq u gaysteen dadwaynihii iyagoo si aan aabo-yeel lahayn u gumaaday shacbigii magaalada Wardheer waxaa maalintaas goobtaas ku geeriyooday 85 ruux oo u badan dad rayid ah.
Dhacdooyinkaas waxay leeyihiin Xusuus Farxadeed iyo Murugo labadaba waxay huwan yihiin murugo marka laga eego xasuuqii loo gaystay dadwaynaha reer Wardheer iyo waliba burburkii dhismayaashii Magaaladda iyo madaxdii lagu laayey Qabridaharre, Qalaafe iyo Dhagaxbuur, dhinaca kalana waxay mudan yihiin xusuus huwan farxad iyo faan marka laga eego sida dadwaynuhu ugu istaageen xaqooda u qab jabiyeen ciidamdii xoogga badnaa ee Itoobiya u difaaceen madaxdii iyo magacii umadda. Waxay noqotay arrin lagu faani karo taariikhdana gashay sidii dadwaynaha reer Wardheer oo aan haysan hub u dhigma kuwii ay wateen Ciidamada Itoobiya ay u difaaceen Magaaladda iyo madaxdii shacbiga, inkastoo dad rayid ah oo aan waxba galabsan ay ku dhinteen halkaas ayna mudan yihiin in loo murugoodo haddana waxaa dhinca kale garab taagan geesinimada iyo sharaftii lagu qab jabiyey ciidmada kibirku waday ee Itoobiya.
Bisha Febraayo taariikhdaas ayay kulmisaa waxayna shacbiga Ogaadeenya ku xusaan bishaan hab Murugo iyo Farxad labadaba leh waxayna u taagan tahay xasuuq iyo xad gudubka loo gaysto dadwaynaha, dhinaca kalana waxay u taagan tahay halganka xaq u dirika ah ee dadwaynaha Ogaadeenya.
Halkan ka dhagayso wixii dhacay Febraayo 1994
Halkan ka dhagayso wixii dhacay Febraayo 1994 FG: Waxaan akhristayaasha ka codsanaynaa cidii haysa taariikhda oo sax ah in ay no soo gudbiyaan ama hadii ay ku arkaan wax khalad ah in ay naga saxaan. nooguna soo hagaaji e-mailkan qorahay99@yahoo.com